GOVERNORAM-PARITRA: Nomem-pahefana misimisy ho an’ny Fitsinjaram-pahefana tena izy – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:11
Efa nomena tetibola ny Faritra tsirairay avy hanaovana asa fampandrosoana.
Accueil/Politika/GOVERNORAM-PARITRA: Nomem-pahefana misimisy ho an’ny Fitsinjaram-pahefana tena izy
GOVERNORAM-PARITRA: Nomem-pahefana misimisy ho an’ny Fitsinjaram-pahefana tena izy
Tsy fanovana anarana fotsiny ihany no nataon’ny Fitondram-panjakana ankehitriny raha nametraka ireo Governora isam-paritra, fa fanovana fomba fiasa sy fametrahana marina ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto amin’ny Firenena. Mbola nohamafisina indray izany, nandritra ny filan-kevitry ny Minisitra omaly, izay nitondra fanamafisana vitsivitsy mahakasika ireo andraikitra sahanin’ny Governoram-paritra.
Lucien R. 19 août 2021
Nankatoavina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra omaly ny didim-panjakana mameno ireo teboka vitsivitsy voalaza tao anatin’ny didim-panjakana laharana faha 2019-1866 tamin’ny 25 septambra 2019 mikasika ny Governora. Fanapahan-kevitra izay hanome fahefana misimisy kokoa ireo Governora isam-paritra hahafahan’izy ireo mandeha haingana kokoa amin’ny fampandrosoana ny Faritra iadidiany avy. Anisan’ireo teboka noresahina, araka izany, ny fanomezana andraikitra ny Governora amin’ny famaritana sy ny fanatanterahana ireo asa izay mifandray amin’ny fampandrosoana ny Faritra. “Ny Governora dia mandray anjara amin’ny fantanterahana ny politika ankapoben’ny Fanjakana. Ny Governora koa dia mandray anjara amin’ny fanarahana ny fanatanterahana ireo « projets d’investissements publics » sy ireo politika ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin’ny Politika ankapoben’ny Fanjakana. Manao tatitra any amin’ny Filohan’ny Repoblika, Praiministra ary ireo Minisitra rehetra voakasika”, hoy ny tatitry ny Filankevitry ny Minisitra.
Nohamafisin’ny didim-panjakana nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra omaly fa manana andraikitra mifototra indrindra amin’ny ara-toekarena sy ara-tsosialy ny Faritra, ao anatin’ny fiaraha-miasa amin’ireo rafitra miankina amin’ny Fanjakana sy tsy miankina. Ny Faritra ihany koa dia mitarika, manome aina sy mandrindra ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekaren’ireo toerana rehetra iandraiketany. “Mikasika ireo asa fampandrosoana ataon’ny Faritra sy ireo asa lehibe ankinin’ny Governemanta aminy dia miara-miasa amin’izy ireo, ireo sampan-draharaham-panjakana na « Services Déconcentrés de l’Etat »”, hoy hatrany ny fanazavana.
Mampivory ara-potoana ireo tomponandraikitra any ifotony
Etsy ankilany, ho fampiharana ny voalazan’ny andininy faha 54 ao amin’ny lalàna laharana faha 2014-020 tamin’ny 27 septambra 2014, ireo sampan-draharam-panjakana dia maka hevitra amin’ny Governora momba ireo tetikasa sy asa fampandrosoana hotanterahina eo anivon’ny Faritra iadidiany sy manome azy ny dika mitovy amin’ny tatitry ny asa. Ankoatra izay, ao anatin’ny fanatanterahana ny andraikitra maha mpandrindra ireo asa ara-toekarena sy ara-tsosialy azy, ny Governora dia mampivory ara-potoana ireo tomponandraikitry ny sampan-draharaham-panjakana any ifotony. “Tokony mampivory ara-potoana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny Governora mba handrindrana ireo asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin’ny fari-piadidiany”, hoy ny fanazavana. Ankoatra ireo asa efa nankinin’ny Fanjakana tamin’izy ireo dia nanamafy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, araka ny tatitra omaly, fa tokony homena andraikitra bebe kokoa ireo Governora amin’ny fanaraha-maso ireo asa sy tetikasa tanterahina any amin’ny Faritra, amin’ny fampivondronana sy fampivoriana ireo tompon’andraikitra rehetra any amin’ny Faritra. Ilaina araka ny tenin’ny Filoha ny fisian’ny tomponandraikitra anankiray mandrindra ireo asa maro eny ifotony. Araka izany dia tokony raisina ho mpiara-miasa, hanara-maso ny asa, ny Governora, hoy hatrany ny tatitra.
RAVELOMANANTSOA BERIJA: Voaheloka higadra 44 volana an-tranomaizina
ANTANANARIVO RENIVOHITRA : Hisy tahirin-kevitra hirakitra ireo vahaolana amin’ny fanadiovana